မှန်ကန်သောနားလည်မှု မှသည် ချမ်းသာအစစ်ဆီသို – Thabarwa Centre
မှန်ကန်သောနားလည်မှု မှသည် ချမ်းသာအစစ်ဆီသို
Mar 14, ’11 8:52 PM
မှန်ကန်သောနားလည်မှု မှသည် ချမ်းသာအစစ်ဆီသို့
2011 မလေး-စင်ကာပူခရီးစဉ်တွင်း ဆူနာမီဆရာတော်ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များကို အနှစ်ချုပ်အဖြစ် ဥာဏ်မီသလောက် အတိုချုံးဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ဆရာတော်သည် မိမိနားလည်နေသော အချိန်တစ်ခုကြာ ရှိနေ-ဖြစ်နေသော ပညတ် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့၏ ဖြစ်ပြီး ပျက်ခြင်း ကို လိုက်ရှုခိုင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ သစ္စာတရား(ဓမ္မ)သက်သက်ပဲဖြစ်နေခြင်း ကိုတိုက်ရိုက်နှလုံးသွင်း လက်ခံခြင်း ဖြင့် ပညတ် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့၏ ဖြစ်ခြင်း -ပျက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်နေရသော နှစ်သက်မှု-လောဘ၊ မနှစ်သက်မှု-ဒေါသ၊ ငြိတွယ်မှု (ဥပါဒါန်)တို့ ကို မှန်ကန်စွာ စွန့်လွှတ်တတ်လာစေရန် (ဓမ္မာနုပဿနာ) နည်းပေးခြင်း ဖြစ်လေသည်။
(သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာ ဆူနာမီဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ဟောကြားသော တရားအနှစ်ချုပ်)
၂၀၁၁ မတ်လ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်
သ မု တိ သ စ္စာ- ပ ညတ် တ ရား
(အ၀ိဇ္ဇာစိတ်မှ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသောမှုကြောင့်သာ တကယ်ဖြစ်နေ-ရှိနေ-မှန်နေသည်ဟု ထင်ရသောတရား)
၁) အများသဘောတူ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ထား၍သာ မှန်ကန်နေသောတရား။
(ဥပမာ။ မောင်လှ၊ ရန်ကုန်၊ တစ်နာရီ၊ ခွေး၊ လူ၊ ဇရပ်၊ အိမ်၊ ကျောင်း)
၂) ဆန့်ကျင်ဘက်စွမ်းအင်များအဖြစ်ထင်ရ။ (သို့) နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်မှုများကြောင့်သာ တကယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ရ။
(ဥပမာ။ ပူမှု-အေးမှု၊ တင်းမှု-လျော့မှု၊ နှစ်သက်မှု-မနှစ်သက်မှု၊ ချမ်းသာမှု-ဆင်းရဲမှု၊ အဖိုဓါတ်-အမဓါတ်၊ အတွေးအခေါ်များ၊ ယူဆချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အကောင်း-အဆိုးခံစားချက်များ)
၃) တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်ချိန်ချိန်၊ တစ်နေရာရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ၊ တိရစ္ဆာန်၊ တစ်ကောင်စီ။ လူ၊ တစ်ဦးစီ။
၄) မိမိနားလည်နေသော ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်၊ (ကာယ၊ ၀စီ၊ မနော) ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ။
၅) မူလအမှန်တရား (ပရမတ်တရား) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပညတ်တရားသည် အမှန်မဟုတ်တော့။ တကယ်မဟုတ်တော့။
၆) ပညတ်အချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှသာ မုသားမဖြစ်ရုံ သီလအကျိုးငှာ မှန်ကန်ပြီးအချိန်၊ ကာလ၊ နေရာ၊ ဒေသ၊ ကို လိုက်၍ ပြောင်းလဲသွားသည်။ တသမတ်တည်းဖြစ်မနေ၊ တသမတ်တည်းရှိမနေ။
၇) တကယ်မဟုတ်သော်လည်း … အနိစ္စအစစ်ကို နားမလည်ခြင်းမှာ (အနိစ္စတရား-အ၀ိဇ္ဇာတရား၏) လှည့်စား၊ ဖန်တီး၊ ပြုလုပ်မှုကြောင့် တကယ်ဟုတ်နေသည်ဟု ထင်ရ။
၈) သုံးရုံသက်သက်၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက်၊ နားလည်ရုံသက်သက်သာဖြစ်။ ဒီ့ထက် မပို။
ပ ရ မ တ္ထ သ စ္စာ – ပ ရ မတ် တ ရား
(တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက် မပါဝင်ဘဲ မူလကတည်း ဖြစ်နေ-ရှိနေ-မှန်ကန်နေသောတရား)
၁) ပရမတ္ထသစ္စာ သည် မူကကတည်းက ဖြစ်နေ-ရှိနေသောတရားဖြစ်သည်။
၂) အချိန်၊ ကာလ၊ နေရာ၊ ဒေသ၊ ကို လိုက်၍ မပြောင်းလဲ။ တသမတ်တည်းဖြစ်နေသည်။
၃) အချိန်၊ ကာလ၊ နေရာ ဒေသ မှ လွန်မြောက်နေသည်။ တသမတ်တည်းဖြစ်နေသည်။
မပြောင်းမလဲ တသမတ်တည်းမှန်ကန်နေသော ပရမတ္ထသစ္စာ (၂)မျိုးရှိသည်။
၁) တသမတ်တည်းဖြစ်နေသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (ဒုက္ခသစ္စာ – သင်္ခါရတရား) (တစ်ခုခု၊တစ်ဦးဦး ၏ ပျက်စီးမှုမဟုတ်)
၂) တသမတ်တည်းရှိနေသော တည်မြဲမှု၊ ချမ်းသာမှုအစစ်၊ (နိရောဓသစ္စာ – အသင်္ခတတရား )
– နံပါတ်(၁)တွင်ဖော်ပြထားသော- တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (ဒုက္ခသစ္စာ) တွင် ပြောင်းလဲ-ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ တသမတ်တည်းဖြစ်နေသော စွမ်းရည်သတ္တိ (၂)မျိုးရှိလေသည်။
ထို စွမ်းရည်သတ္တိနှစ်မျိုးမှာ –
(က) သမုတိသစ္စာ(ပညတ်တရား) များကို အချိန်တစ်ခုကြာ တစ်ကယ်ရှိနေ၊ ဖြစ်နေ၊ တကယ်ဟုတ်နေသယောင် အထင်မှားနေစေရန် တသမတ်တည်း ဖန်တီးပြုလုပ်နေမှု။
( သို့ ) မပြောင်းမလဲ တသမတ်တည်းဖြစ်နေသော ဖန်တီးပြုလုပ်မှုအစစ်၊ လိမ်လည်မှုအစစ်၊ ပြုလုပ်မှုအစစ်။ အလုပ်အစစ်။ (သမုဒယသစ္စာ)
(ခ) နောက်စွမ်းရည်တစ်မျိုးမှာ – ပညတ်တရား-ပရမတ်တရားများကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိနားလည်နေမှု။ မပြောင်းမလဲ တသမတ်တည်း သိနားလည်နေမှု ။ သိမှုသက်သက်-သိမှုအစစ်။ (မဂ္ဂသစ္စာ)
တ ကယ့် တ ရား အ လုပ် အ စ စ် – မ ဂ္ဂင် အ လုပ်
– မဂ္ဂင်တရားအလုပ်အစစ်သည် တစ်ခုခုပြုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်- ဘာမှမလုပ်ပဲနေခြင်းလည်း မဟုတ်။
မှန်ကန်သော အာရုံစူးစိုက်ထားနိုင်မှု (သမ္မာသမာဓိ) မှန်ကန်သော လုံ့လစိုက်မှု၊ (သမ္မာဝါယာမ)များဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နေမှု(သမ္မါဒိဋ္ဌိ)၊ မှန်မှန်ကန်ကန် နှလုံးသွင်းမှု(သမ္မာသင်္ကပ္ပ)၊ မှန်ကန်သော အမှတ်ရမှု-မမေ့မှု ၊ (သမ္မာသတိ) ဖြစ်သည်။
– မှန်ကန်သော နားလည်မှု၊ နှလုံးသွင်းမှု၊ မမေ့မှု၊ သတိရမှု သည် –
– တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက် အပေါ် မဟုတ်ပဲ ၊ ကိုယ်နားလည်နေကျ ကိုယ်တွေ၊ စိတ်တွေ၊ အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ နာမှု၊ ကျင်မှု၊ ပိန်မှု၊ ဖောင်းမှု၊ အသက်ရှုမှုတွေ မဟုတ်ပဲ – (တနည်းအားဖြင့်) သမုတိသစ္စာ-ပညတ်တရားများ အပေါ်တွင် ထားရမှာ မဟုတ်ပဲ။
မှန်ကန်သော နားလည်မှု၊ နှလုံးသွင်းမှု၊ မမေ့မှု၊ သတိရမှု သည် – အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော- ပရမတ္ထသစ္စာ နှစ်မျိုးမှ …
ပထမ အမှန်တရား . . . တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု (သို့) ဒုက္ခသစ္စာ၏ ပထမစွမ်းရည်သတ္တိ ကို ဖြစ်စေ-
ဒုတိယစွမ်းရည်သတ္တိ ကိုဖြစ်စေ မမေ့ရန် – နှလုံးသွင်းရန် – ယုံကြည်ရန် ဖြစ်လေသည်။
– သမုတိသစ္စာ(ပညတ်တရား) များကို အချိန်တစ်ခုကြာ တစ်ကယ်ရှိနေ၊ ဖြစ်နေ၊ တကယ်ဟုတ်နေသယောင် အထင်မှားစေရန် ဖန်တီးပြုလုပ်နေသော တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု (ဒုက္ခသစ္စာ) ၏ ပထမစွမ်းရည်သတ္တိ ကို မမေ့ရန် ၊ ယုံကြည်၊ လက်ခံ ၊ နှလုံးသွင်းနေရန် ဖြစ်လေသည်။
ထိုကဲ့သို့ – (ပရမတ္ထသစ္စာ-ဒုက္ခသစ္စာ) တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု အမှန်တရား၏ စွမ်းရည်သတ္တိကို မမေ့ခြင်းအားဖြင့်- ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းအားဖြင့် – (သမုတိသစ္စာ)ပညတ်တရားများကို အဟုတ်ထင်နေမှု၊ အတည်ယူနေမှု၊ (အ၀ိဇ္ဇာ) ကို စွန့်လွှတ်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ – အမှန်တရား၏စွမ်းရည်သတ္တိကို မမေ့ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းနိုင်ရန် ကြိုးစား နေခြင်းအားဖြင့် – ပညတ်တရားများကို (ကာယ၊ ၀စီ၊ မနောများကို) ငြိတွယ်မှု-အဟုတ်ထင်မှု မဖြစ်ပေါ်ပဲ သုံးရုံသက်သက်၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက်၊ နားလည်ရုံသက်သက် သာဖြစ်လာရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
မြင်-မြင်ရုံ၊ ကြား-ကြားရုံ၊ သုံး-သုံးရုံသက်သက်ဖြစ်ကာ ငြိတွယ်မှုကင်းလာခြင်း (ဥာဏ် ဖြစ်လာခြင်း)သည်သာ တကယ့်တရားအလုပ်အစစ်-၀ိပဿနာ ဖြစ်လေသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လိုရင်း အစစ် ဖြစ်လေသည်။
ကာယ-၀စီ-မနောများ နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်နေနိုင်သောစွမ်းရည်သတ္တိကို ဖြစ်စေ၊ မလုပ်ဘဲနေနိုင်သော စွမ်းရည်သတ္တိကို ဖြစ်စေ၊ အတည်မယူပဲနေနိုင်သည့် (စွန့်လွှတ်နိုင်သည့်) စွမ်းရည်သတ္တိဖြင့် ပရမတ္ထသစ္စာအမှန်တရား . . . တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု (ဒုက္ခသစ္စာ သင်္ခါရတရား)၏ စွမ်းရည်သတ္တိများကိုသာ မမေ့ရန်- နှလုံးသွင်းရန် – လက်ခံယုံကြည်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း သည် တကယ့်တရားအလုပ်အစစ်-၀ိပဿနာ ဖြစ်လေသည်။
ဆူနာမီဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ သစ္စာတရားဟောပြောချက်များမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
မှတ်ချက် ။ တရားအလုပ်အစစ်သည် မိမိပြုလုပ်နေကျ ကာယ-၀စီ အလုပ်များကို ပယ်ခြင်း ၊ တွယ်ခြင်း ၊ ဝေဖန်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု (ဒုက္ခသစ္စာ) အမှန်တရား၏ စွမ်းရည်သတ္တိများကို မမေ့မှု၊ သတိရမှု-အောက်မေ့မှု ဖြင့် ကာယ-၀စီ-မနော တို့ကို သုံးရုံသက်သက်၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက်၊ နားလည်ရုံသက်သက်သာဖြစ်လာစေခြင်းသာ။
2011 နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အတွင်း ဆရာတော်ဟောကြားသောတရားအနှစ်ချုပ် ကို pdf ဖိုင်အဖြစ် ပရင့်ထုတ်ယူလိုပါက- http://www.mediafire.com/?guj2oyad0md88z8
ပိုမိုနားလည်လိုပါက- မလေး-စင်ကာပူခရီးစဉ် တွင်ဟောကြားသော တရားတော်များ (အသံဖိုင်များ)ဒေါင်းလုပ်ရန် http://www.mediafire.com/?vaownvljgy32p